Inta u dhaxaysa laynka | FXCC Blog
A Shamuus Meelo Shumis ah Koorso, raadinta ficil qiimaha
Feb 27, 17 • 7172 Views Inta u dhaxaysa laynka • Comments Off on A Aamino Shumaca Kursi, raadinaya ficil qiimaha
OK, sidaa daraadeed badankeena ganacsatada waxay ogtahay waxa shamacadu yihiin iyo waxa ay u malaynayaan in ay matalaan jadwalkeena. Waxaan ka fogaaneynaa casharka taariikhda, adigoo soo gudbinaya sheekadaas degdegga ah iyo xasuusinta macnaha shumaca iyo hooska ....
Cilmi-nafsiga ayaa ku lug leh Forex Trading
Feb 27, 17 • 6749 Views Inta u dhaxaysa laynka • Comments Off on Psychology ku lug leh Forex Trading
3 Ms ee ganacsiga waa dhacdo inta badan lagu magacaabo marka laga hadlayo ganacsiga; maskaxda, habka iyo maareynta lacagta ayaa noqday shuruudaha la aqbalo oo aan ku qeexayno daraasaadka ku lug leh ganacsiga. Habka guud ahaan lagu qeexay sida istiraatiijiga ganacsiga ...
Feb 23, 17 • 6004 Views Inta u dhaxaysa laynka • Comments Off on Life ee Ganacsiga ah
Maxaa nagu soo jiitay ganacsiga FX, maxaan u qabanaa, sidee ay u shaqeyneysaa, miyay la kulantay hadafkeena?
Apr 30, 14 • 9013 Views Inta u dhaxaysa laynka • 1 Comment
Waqti ka waqti waxaa habboon in dib loo soo celiyo si ay u qaadato 'helikobtar helitaanka' meesha aan hadda ku sugnahay ujeedooyinka shakhsi ahaaneed ee aan asal ahaan ka soo bixinnay markii ugu horeysay ee aan ku soo galnay warshadan. Sababta ay u tahay ...
Miyuu demo ganacsiga saxda ah ka hor intaan 'ganacsiga dhabta ah' iyo haddii ay sidaas tahay markaa aan ka baxeyno ganacsiga demo?
Apr 29, 14 • 8145 Views Inta u dhaxaysa laynka • Comments Off on Demo iibinta habka saxda ah ka hor 'ganacsiga dhabta ah' iyo haddii ay sidaas tahay at wixii dhibic ah ee aan ka guuri ganacsiga demo?
Waxaa jira qalab aad u fara badan oo faa'iido leh oo naga caawiya baqdiyeyaasha inooga bixiya nooca inta badan la isticmaalo, si khaldan loo isticmaalo, ama la iska indho-tiray oo xisaabta demo waa mid ka mid ah bixinta lacag la'aanta ah. Waxaa hoos loo isticmaali jiray ganacsatada intooda badani aad ugu qulqulayaan inay u guuraan ganacsi dhab ah iyo sida ...
Miyay tahay inaan isku dayno inaan badbaadinno oo aan xadidno burburka ganacsiga ee xun xun, ama ma aqbalo oo kaliya in aan u guuro?
Apr 25, 14 • 7975 Views Inta u dhaxaysa laynka • Comments Off Miyay tahay inaan isku dayno inaan badbaadinno oo xaddidno burburka ganacsiga ee xun xun, ama ma aqbalo oo u ogolaato?
Qodobka ugu muhiimsan ee aynu ku qanacsan nahay habka suuq-geynta waa, iyada oo aan loo eegin siday u adag tahay istraatijiyadeena guud ee ganacsiga iyo iyada oo aan loo eegin sida dhamaystiran ee aan u aaminsanahay qorshahayaga ganacsi inuu yahay ganacsatada oo dhan (mararka qaarkood) waxay qabtaan ganacsiyada 'si xun' ...
Apr 24, 14 • 9358 Views Inta u dhaxaysa laynka • 1 Comment
Waxaa jira xaqiiqooyin xaqiiqo ah oo ku sii jiray sanado badan oo la xiriira ganacsiga. Ganacsatada qibrada leh iyo kuwa guuleysta waxay tilmaamayaan in, inkasta oo ay awood u leeyihiin in ay helaan jaangooyooyinka sarraysa ee 'sax', si ay u galaan suuqa ...
Waxaan doonayaa inaan tijaabiyo ganacsiga FX markale intee ka badan ayaan u sameeyaa waqti kale?
Apr 23, 14 • 7784 Views Inta u dhaxaysa laynka • Comments Off waxaan rabaa inaan tijaabiyo ganacsiga FX markale intee ka badan ayaan samaynayaa waqtigaan si ka duwan?
Waxaa jira qaar ka mid ah raadinta ganacsiga FX; mar haddii 'buggu uu ku qaniino' waa mid aad u adag in aad dhabarkaaga dhabarka u rogto warshadaha ballaaran iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga. Xitaa haddii aad tijaabisay ganacsiga FX iyo lacag lumay ...
Halkee iyo goorma ay tahay in ganacsatada cusubi ay bilaabaan inay ku daraan falanqayn farsamo oo ku saabsan ganacsigeena
Apr 22, 14 • 7046 Views Inta u dhaxaysa laynka • 1 Comment
Ka dib markii aan ogaanno ganacsiga tafaariiqda ganacsiga dareenka dabiiciga ah waa inaan tijaabino suuqyada iyada oo dhammaan xulashooyinka farsamooyinka kala duwan ee la heli karo laga heli karo meheradeena ganacsiga. Halka falanqaynta aasaasiga ahi u baahan tahay xirfad gebi ahaanba ka duwan
Apr 18, 14 • 9214 Views Inta u dhaxaysa laynka • 1 Comment
Nasiibku waa erey aad u murugo leh isla markaana ifafaale ahaan isweydaarsanaya ganacsiga. Iyadoo sanadihii iyo xaalado badan ay ku qaadatay in ay abuuraan istaraatijiyad ganacsi oo lagu guulaysto, kadibna ugu dambeyntii u keenaan qorshaha ganacsi ee caddaynta ah, waa wax aad u adag in mid ka mid ah ...